पुँजीवाद नै जलवायु परिवर्तनको कारक ! - Online Majdoor
पुँजीवाद नै जलवायु परिवर्तनको कारक !
उद्धृत भनाइ सन् २०१९ को डिसेम्बरको पहिलो साता स्पेनको म्याड्रिडमा भएको विश्व जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलन (कोप–२५) मा १७ वर्षकी किशोरी वातावरण अभियन्ता ग्रेटा थुनवर्गले व्यक्त गरेको मन्तव्यको एक अंश हो । त्यही डिसेम्बर महिनाको अन्तिम साता चीनको उहान सहरबाट विश्वभरि कोभिड–१९ को महामारी फैलियो । करोडौँ मानिस सङ्क्रमित भएका छन्, लाखौँको ज्यान गइसकेको छ ।
पृथ्वीका हजारौँ प्रजातिको अस्तित्व सदाको निम्ति लोप हुने तरखरमा छ । विगतका तीन–चार शताब्दीमा विभिन्न प्रजाति लोप हुने क्रम अरू तीव्र भएको हो । विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट मानिएको मानवको अस्तित्वसमेत सङ्कटमा परेको छ । यी सबैको पछाडि वातावरण एवम् प्रकृतिको विनाश मुख्य कारण हो भन्ने सोझो उत्तर आउनसक्छ । तर, यो सङ्कटको मुख्य कारक भने पुँजीवाद नै हो ।
यो आविष्कार हो कि लूट !
सन् १४८४ मा क्रिस्टोफर कोलम्बस पूर्वी एसियाको व्यापारिक मार्ग पत्ता लगाउन आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव लिएर पोर्चुगलका राजासमक्ष गए । यात्रा खतरनाक र महङ्गो थियो । जहाज, आवश्यक सामग्री र जहाजी कर्मचारीको पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । लगानी फिर्ता आउने कुरा निश्चित थिएन । तसर्थ, पोर्चुगलका राजाले प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे । तर, कोलम्बसले हार खाएनन् । उनी इटाली, फ्रान्स, बेलायतहुँदै पुनः पोर्चुगलका शासकसमक्ष पुगे । हरेकपटक उनको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । उनले स्पेनसँग आफ्नो ‘भाग्य’ परीक्षण गर्ने प्रयास गरे । नभन्दै रानी इसाबेल्ला कोलम्बसको महत्वाकाङ्क्षी योजनामा लगानी गर्न राजी भइन् । परिणामतः कोलम्बसले अमेरिका आविष्कार गरे ।
अमेरिकाको आविष्कारले गर्दा उत्तर र दक्षिण अमेरिकामाथि आधिपत्य जमाउन स्पेनलाई बाटो खुल्यो । स्पेनले अमेरिकामा सुन र चाँदीको खानी उत्खनन गर्न थाल्यो, उखु र सुर्तीको खेती थाल्यो । यसरी अमेरिकी प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको युरोपेली अनियन्त्रित दोहनको सुरुआत भयो । जङ्गल फाँड्दै बस्ती बसाल्न थालियो । स्पेनियाली राजा, बैङ्कर, व्यापारीहरूले कल्पनातीत धन आर्जन गरे । विद्वान लेखक युवल नोहा होरारीले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘सेपिअन्स’ मा भनेझैँ अमेरिकाको आविष्कारबाट उपनिवेशको विकास भयो, उपनिवेशबाट नाफा लियो । विश्वभर साम्राज्य फैलाउँदै १६ औँ शताब्दीमा स्पेन युरोपकै सबभन्दा बलियो राज्य बन्यो ।
उपनिवेशवादमा केही मौलिक पक्षहरूको स्वतन्त्रता हुन्छ तर साम्राज्यवादमा राज्य पूर्णरूपमा विलयको अवस्थामा हुन्छ । लेनिनले साम्राज्यवादलाई पुँजीवादको उच्चतम रूप भन्नुभएको छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध साम्राज्यवादी सत्ता स्वार्थको परिणाम थियो । युद्धको नाममा आणविक हतियारको होडबाजी भयो । यसै सिलसिलामा पृथ्वीलाई कैयौँपटक ध्वस्त गर्न सकिने आणविक हतियार बन्यो । एउटै बमको प्रहारबाट करोडौँ जीवजन्तुलगायत लाखौँ मानिस मारिए । हिरोसिमा र नागासाकीजस्ता ठूला सहरसमेत मात्र एक–एक वटा बमबाट पूर्णतः ध्वस्त भए । भियतनाम, कोरिया युद्धले असीमित जङ्गल तथा मानवबस्ती खरानी बनायो । प्राकृतिक तेलको निम्ति भएका इराक, इरान, सिरिया, लिबिया, अफगानिस्तान युद्ध सबै साम्राज्यवादकै परिणाम हुन् । शक्तिशाली राज्यले कमजोरमाथि बलपूर्वक प्रभुत्व जमाउने साम्राज्यवादी युद्ध नै सम्पूर्ण मानव जगतको सबभन्दा खतरा हो ।
औद्योगिक क्रान्तिदेखि पृथ्वीको वायुमण्डलमा थुप्रिएको अत्यधिक कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन लगायत अनेक हानिकारक ग्यासले गर्दा वायुमण्डल जीवको निम्ति प्रतिकूल बनेको हो । पृथ्वीका जीवको सुरक्षा कवचको रूपमा रहेको ओजन तहमा पनि वायु प्रदूषणकै कारण प्वाल पर्दै छ र यसैबाट पृथ्वीको सतहसम्म पुग्ने अल्ट्राभायोलेट विकिरणको कारण जीव जगतको अस्तित्व समाप्त हुने स्थिति छ । ओजन तहमा भएको क्षतिको कारण सन् २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत बालीमा क्षति पुग्ने प्रक्षेपण पनि सार्वजनिक भएको छ ।
संरा अमेरिकाले वातावरण प्रदूषण घटाउने वा कार्बन उत्सर्जन घटाउने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताअनुसार काम गर्न चाहिरहेको छैन । ग्रीन हाउस ग्यास (कार्बन डाइअक्साइड) उत्सर्जन घटाउनेसम्बन्धी सन् १९९७ को क्योटो अभिसन्धिमा संरा अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेर पनि अनुमोदन गरेन । २०१७ मा अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले ‘पेरिस सम्झौता’ बाट हात झिक्ने निर्णय ग¥यो । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिकीकरणको समयको तुलनामा २ डिग्रीभन्दा तल राख्ने र अझ सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीभन्दा तल राख्न प्रयत्न गर्ने सहमतिमा १ सय ९७ देशले सहमति जनाएपनि १ सय ५१ राष्ट्रले मात्र सम्झौता अनुमोदन गरेका छन् । अमेरिकाका ठूला कम्पनीको बोलीमा लोली मिलाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन एउटा अफवाह मात्रै हो भनेरै निर्वाचन जितेका थिए । आफू राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने कुरा पनि बताएका थिए ।
विश्वमा ७१ प्रतिशत प्रदूषण फैलाउने १०० खराब कम्पनीमध्ये पाँचौँ स्थानमा पर्ने एक अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी ‘एक्सोन’ को ढाँटबारे एउटा उदाहरण राख्नु सान्दर्भिक होला । तेल तथा ग्यास उत्पादन गर्ने एक्सोनले गरेको एक अध्ययनबाट जलवायु परिवर्तन हुने कुरा ५० वर्षअगाडि नै पत्ता लागेको तर त्यसलाई लुकाइएको ‘लसएन्जेल्स टाइम्स’ पत्रिकाले प्रकाशित ग¥यो । एक्सोनले अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु त कता हो कता उल्टो जलवायु परिवर्तन हुँदैन भनी ‘प्रपग्यान्ड’ गर्न करोडौँ डलर खर्च ग¥यो । त्यस कम्पनीले जलवायु परिवर्तन हुँदैन भनी दावी गर्ने राजनीतिज्ञहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने काम ग¥यो । ट्रम्प तिनै नेतामध्ये एक हुन् ।
मन्थ्ली रिभ्युमा प्रकाशित ‘पुँजीवादले हाम्रो हत्या गर्दै छ, हामीले नै यसलाई समाप्त पार्नु पर्छ’ शीर्षकको एक लेखमा लेखक ड्यानियल टाइलरले लेखेको भनाइ यहाँ राख्नु उपयुक्त होला – “विश्व पुँजीवादको नेतृत्व गर्ने शक्ति संरा अमेरिकाले महामारी नियन्त्रण गर्ने आफ्नै संस्था ध्वस्त ग¥यो । तर, चीन र रसियाविरुद्ध लड्न अर्को २५ वर्षको निम्ति आणविक हतियारका हरेक पक्षको आधुनिकीकरण एवम् सुधार गर्न १७ खर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ ।”
बोजिनीमा डुबेको युवकको लास भेटियो
मङ्गलबार भक्तपुरमा कहाँ कति संक्रमित ?